Abaalmarinta ALMA oo uu ku guuleystey Wolf Erlbruch - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wolf Erlbruch oo ku guuleystey Almapriset 2017. Sawirkii : TT och Peter Hammer Verlag
Abaalmarinta ALMA oo uu ku guuleystey Wolf Erlbruch
Wolf Erlbruch oo ku guuleystey abaalmarinta ALMA
La daabacay tisdag 4 april 2017 kl 13.20
Abaalmarinta suugaanta ee lagu xasuusto qoraayaddii caanka aheyd ee Astrid Lindgren ayaa waxaa sanadkaan ku guuleystey qoraa jarmal ah oo lagu magacaabo Wolf Erlbruch oo caan ku ah farshaxanka iyo sawirada buugaagta caruurta lagu xardho.
Maktabadda boqortooyada ee magaalada Stockholm ayaa maanta arrinkaas ku dhawaaqdey.
Boel Westin oo ah madaxa guddiga abaalmarintaas marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ALMA ayaa ku tilmaantey qoraaga ku guuleystey abaalmarintaas in uu furey wadda cusub oo hal abuurka la xiriirta.
Abaalmarintaan ayaa waxaa la gudoonsiiyaa sanad walba qorayaasha qora buugaagta caruurta iyo dhallinyarada loogu talagaley.
Abalmarintaan lagu xasuusto qoraayaddii caanka aheyd ee Astrid Lindgren ayaa waxaa la aasaasey sanadkii 2002-dii, waxaana sanadkaan loo soo sharaxey ilaa 226 qof iyo hey’adood oo laga soo kala sharaxey ilaa iyo 60 dal oo kala duwan.